78 akwụkwọ ahụ aja na-asọpụrụ nke Amaonye na 4chan | Site na Linux
78 na akwụkwọ ahụ aja na nsọpụrụ nke Amaonye na 4chan
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Imebe, GNU / Linux, Ndị ọzọ
Ndị gara / na-agagharị na saịtị a, ọtụtụ ga-amata nke ọma amaonye, ihe ha na-eme, ihe ha na-anọchi anya ya.
Amaara m na post a enweghị ọtụtụ ihe ọ ga-eme Linux o Software Nwepu dị ka nke a, mana ọ nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme Nnwere onwe. Ọ bụ ya mere m ga-eji kọọrọ gị akwụkwọ ahụaja ndị a, akwụkwọ ahụaja nke ndị a na-alụ ọgụ maka nnwere onwe na ịntanetị, megide ọchịchị, imegharị, ikpe na-ezighị ezi.
Ọ bụ ụzọ m si asị «Gracias»… I meela nke ukwuu maka ihe ị na-eme, ihe ị na-agbachitere, ihe ị na-alụ, na-ekele gị maka ịnọ ebe ahụ ịbụ“ mma agha ”anyị na ọgụ maka ikike anyị for
Ana m ahapụrụ gị 78 Akwụkwọ ahụaja na-enweghị aha, 4chan, na ụfọdụ ndị ọzọ 🙂
Ndia bu ndi ozo:
Lee ụfọdụ n'ime 4chan, n’ihi na ọ bụghị ihe niile bụ amaonye, ma ọ bụ ma eleghị anya ee ... ma eleghị anya ha bụ otu, ma eleghị anya ọ bụghị ... LOL !!!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Imebe » 78 na akwụkwọ ahụ aja na nsọpụrụ nke Amaonye na 4chan
Ndị ọbara bụ ndị kachasị mma, ọ bụ ezie na ọ bụghị maka ndị na-ege Mallcore dị ka gị
Echere m na ha bụ kama na akwụkwọ ahụ aja nke «V», protagonist nke V maka Vendetta ... 😀
Kpọmkwem…. Kedu ihe n’eme ihe nkiri n’uche ndi mmadu .. Amazing Holy Deeosss.
Mara na akwụkwọ ahụ aja, M n'ezie mmasị na nke ikpeazụ tupu ọnyà ndị. 😀
Ezi na akwụkwọ ahụ aja, ihe nwute na 4chan na Amaonye na-niile na-amasị m.
ohhhhhhhh akwa post KZKG hehehe ezigbo nchịkọta nke Wallss 😉 hehehe ka m lee nke m họọrọ maka desktọọpụ m hehe
You na-agụ nke a?:
Ọ bụ ihe ijuanya na usoro niile a na-eme na-enweghị aha.
Ọ nwere dum keyboard jupụtara eziokwu.
Ọ dị mma, ama m na oge ọzọ m ga - ebugote post na akwụkwọ mgbochi site na fim «HUGO» ajajajajajajajajajajajajja xD
N'ezie, izizi m zutere Anonymous karịa ihe nkiri a nke kwuru elav, agbanyeghị m dokwuo anya ... Etinyeghị m akwụkwọ ahụ aja maka ihe nkiri ahụ n'ebe dị anya na ya.
Ihe ha masịrị m, anaghị m eji akwụkwọ ahụ aja mana ibudata ha hehe.
Enwere m mmasị na ha 😀
akụkụ gbara ọchịchịrị nke ndụ? poof chọọ ìhè ma ị ga-ahụ udo
Zaghachi ka testo
Ezigbo mma, enwere m ụfọdụ.
dị mma nke ukwuu mana ọ ga-amasị m ma e nwee onye yiri nke ahụ na-ekwu «anyị bụ legion. anyị anaghị agbaghara. anyị anaghị echefu. chere anyị. » ma dị iche iche na na Spanish na-ekwu «anyị bụ ndị legion. Anyị anaghị agbaghara. anyị anaghị echefu. Ha na-eche anyị. " : v
Ha kachasị mma. Ihe obula ikwuru, anam ekele gi ma jisie ike. Na apollo100%.
dị mma nke ukwuu na-amasị m fọrọ nke nta niile
Zaghachi ka micky
Kpochapụ ihe ndekọ Google gị
Chọrọ ịgbanwe ihe na Choqok? Nke a bụ ohere gị